Imisipha ye-flabby yesithanga sangaphakathi
Wonke owesifazane ufuna ukuba mnandi, ekhangayo, kungakhathaliseki ubudala. Futhi, njengoba wazi, imvelo ihlelwe ukuze kuleso sibalo kukhona izindawo eziningi eziyinkimbinkimbi ezidinga ukulungiswa, kunamadoda. Isizathu singama-hormone akhiqizwa ngumzimba wesifazane, okufaka isandla emafutheni asiswini esiswini, i-pelvis, imilenze. Kusobala ukuthi abesifazane abakwenzeki ukushintsha ngokuphuthumayo ucansi, ezimweni eziningi, wonke umuntu uyajabula ngocansi azalwa ngalo. Kodwa-ke, owesifazane ozihloniphayo akafuni ukubekezelela ukwedlula ama-kilogram. Futhi imisipha ye-flabby yehlangothini elingaphakathi kwethanga nakakhulu ngeke ihlale ngaphandle kokunakekelwa kwesigamu sowesifazane.
Okwamanje, kunamasu amaningi, izindlela nezinkimbinkimbi zokuzivocavoca zokulungisa isisindo nesimo sabo.
Owesifazane ngamunye unengxenye yakhe "yenkinga" yomuntu ngamunye. Ake sibheke ngokucophelela ekuqiniseni imisipha yecala langaphakathi lamathanga, njengoba le ndawo inzima kakhulu ukuyilungisa. Kodwa, njengoba bethi, ukubekezela kunzima wonke peretrut. Ngokusebenza okukhuthazayo, okuhlelekile kwezincomo zethu, uzobona umphumela oyifunayo futhi uzokwazi ukukhombisa imilenze yakho.
Indlela efanele kakhulu yokuxazulula le nkinga ukuqina. Le nqubo ivame kakhulu kulesi sicelo futhi ithandwa ngabesifazane abaningi bezwe lanamuhla. Ukufaneleka - lokhu kuyisethi yokuzivocavoca okukhethiwe ngokukhethekile, okuhloswe ukulungisa izimo zomzimba wakho, kanye nobukhulu bayo. Yini ethandwa kakhulu ngokuqina? Imiphumela yalezi zifundo zicacile futhi zihleliwe isikhathi eside. Kunezinhlelo ezihlukene zokuqinisa nokulungisa imisipha yangemuva, isisu, izintambo, izandla, njll. Ngaphandle kohlangothi lwekhanga kunamasu abo okusebenza.
Kubalulekile ukukhumbula nokulandela imithetho ethile elula ngaphambi kokuqala amakilasi empilo. Okokuqala, konke kuqala ngokufudumala nokwelula, ngokusho, ukufudumala imisipha yakho, kuholele ekutheni kube nesimo esiqinile, esilalelayo. Futhi lokhu: ukuphenduka kweyindilinga ye-trunk ngakwesobunxele, ngakwesokudla; ikhanda elifanayo. Thetha ngakwesokunxele, kwesokudla, phambili, emuva. Ukuwela phambili umlenze ngamunye bese wenza ukunyakaza okuhamba phansi. Ukunyakaza okujikelezayo kwonyawo ngakwesobunxele, ngakwesokudla. Ukuhamba kuqala ohlangothini lwangaphakathi, ke-ezinyaweni zangaphandle - izenzo ezinomphela ekufudumele.
Enye iphuzu elibalulekile - phakathi nokuzivocavoca, sebenzisa inani elaneleyo lomswakama. Amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi atuswa. Beka ibhodlela eceleni kwakho futhi ngezikhathi ezithile uthathe ama-sips ambalwa ukuze ugweme ukuphelelwa amandla kwamanzi.
Khumbula, ngenkathi wenza ukuvivinya umzimba, phefumula ngokulinganayo. Bhala ngekhala, uphume ngomlomo.
Imisipha ayisetshenziswa kancane
Kunezivivinyo eziningi zezinhlangothi zangaphakathi zethanga. Kulesi sihloko, sikhethe isethi yokusebenza kahle, kodwa akusilo ukuvivinya okulula. Izinkinga ekuqiniseni uhlangothi lwangaphakathi lwe-hip zivela ngokuqondile ngoba lezi zinhlanzi zingabandakanyeki ekuhambeni komzimba.
Okokuqala: yimani ngokuqondile, izinyawo zamaphethelo ngaphandle. Amandla ebhande, amahlombe aqondiswa. Isisindo somzimba sisehlangothini lwesobunxele. Phakamisa unyawo lwakho lokunene phezu kwephansi ebangeni lamamitha angu-10, uwela ngakwesobunxele. Kulesi simo, izinyawo zomlenze wokunene zihamba phambili. Bese ususa isisindo somzimba ngakwesokunene bese wenza lo mkhuba ngesilonda sesokunxele esikhulisiwe. Ngomlenze ngamunye, phinda nokusebenzisa izikhathi ezingu-15-20.
Okwesibili: izandla esihlalweni, ngemuva, imilenze iyahlukana kakhulu namadolo. Kancane kancane siyaziqhenya, sizama ukwehla phansi ngangokunokwenzeka, ngaphandle kokuphazamisa, ngesikhathi esifanayo, ukuhlelwa kokusebenza. Bala ngamakhono akho angokwenyama. Ukusebenza ngokweqile, ulethe imisipha ebuhlungu, futhi, ayifanele. Phinda usebenzise izikhathi ezingu-10-15.
Okwesithathu: imilenze ibanzi kakhulu, izinyawo zibukeka zifana. Senza uhlobo olulandelayo lwe-squat: unyawo olungakwesokunene luthinta ngaphakathi kwethanga, kuyilapho isokunxele senza isikhala esincane, esijulile. Bese ususa leli cala ngakwesokudla. Imilenze iyaqhubeka igobile. Ukuthuthelela ngokuphelele emlenzeni wesokudla, ngakwesokunxele kwesokudla. Okufanayo kwenziwa ngomunye umlenze. Ngomlenze ngamunye, phinda usebenzise izikhathi ezingu-10-15.
Okwesine: isikhundla - ehlezi phansi. Sisekela emuva ngemuva ngezandla zethu, imilenze yethu iqondile. Siphakamisa imilenze emibili ngaphezu kwephansi, ekude ngamamitha angu-10, siwasabalalisa emaceleni ngangokunokwenzeka, ukuze izinyawo zakho zingawi phansi. Khona-ke siletha izinyawo zethu ndawonye. Ukuzivocavoca kuphindwe izikhathi ezingu-10.
Okwesishiyagalombili: ulele ngakwesokunxele. Umlenze wesokunxele uhlezi ngqo phansi. Sithembela ngakwesobunxele ngepeni lama degree angu-90. Isandla sokunene singaphambi. Ngaphansi phambi kwebhande langakwesobunxele sibeka unyawo lwesinyawo sokunene. Siqala ukuphakamisa umlenze wesokunxele phezulu naphansi, hhayi ukuthinta phansi. Unyawo lusekelwe kulo, sizwa ukuhlukumeza kwemisipha. Okufanayo kwenziwa ngezinyawo ezifanele ngakwesokudla. Inyawo ngalinye liphindaphinda izikhathi ezingu-20.
Isithupha: isikhundla - silele phansi. Ukugcizelela ezandleni zombili, ukugoba ku-elbow. Imilenze yebo, iphakamisa ama-90 degrees phezulu. Esisisindo, senza ukuhamba okuhamba phambili, kufana nokuhamba kwezikhali. Ukuvivinya umzimba kuphindwe izikhathi ezingu-15. Uma ngabe ucingo lwakho lubuthakathaka, bese uphinda lo mkhuba izikhathi ezimbalwa.
Isikhombisa: isikhundla - silele ngemuva. Gxila ezingalweni, ugobile emaceleni. Imilenze eqondile iphakamisa futhi isebenze ukunyakaza okuhambayo. Futhi, izikhathi ezingu-10-15.
Lesi setha sokuzivocavoca kufanele sikwenze okungenani zonke ezinye izinsuku.
Khumbula: kumuntu ngamunye inani lokuphindaphinda umzimba kufanele likhethwe yilowo nalowo umqeqeshi, ucabange isimo sakhe sempilo kanye nomzimba.
Esinye iseluleko esilula kodwa esisebenzayo: ungasebenzisi i-elevator, ukhuphuka izitebhisi, uqondise umlenze emadolweni kuzo zonke izinyathelo. Ukucindezela lo msebenzi, ungadlula izinyathelo ezimbili ngesikhathi esisodwa. Ngokuvamile, hamba kaningi, hamba. Thola izinzuzo eziphindwe kabili: ukhohlwa ukuthi kukhona khona inkinga egama layo lingumfutho we-flabby. Ngesikhathi esifanayo, kuyoba nengxenye yomoya omusha.
Indlela esheshayo yokushisa amakholori
Imenyu eningiliziwe yokudla kwamaqanda amaviki amane
Indlela yokudla emva kokudla kwesisindo
Yoga kuwo wonke owesifazane
Ukulungiselela ukubeletha ngokomzimba nangokwengqondo
Inkukhu namazambane emaqenjini amaningi
Ukuthandwa noma izintombi
Ukufunda ukwenza umuthi womuthi we-matt ekhaya
Isaladi ne-avocado kanye anyanisi obomvu
Isithombe sezingubo ezingu-60
Yimaphi ama-tattoos alethe inhlanhla nenjabulo?
Ikhekhe lamaqabunga e-Alaska
Izizathu Eziyisikhombisa Zokuhlaselwa Kwabesifazane
Cutlet ukulwa phakathi kukaJarmolnikov no-Smekhovy: zokupheka zangempela ze-cutlets ezivela emindenini yenkanyezi
Pate of ubhontshisi omhlophe namaqanda